Haasaa, sirbaa fi diraamaa: Jireenya imala magaalaa Mumbaay - BBC News Afaan Oromoo
Buufata baaburaa namni itti baay'atuufi Mumbaayiitti argamutti walirra dhaabachuun erga imaltoonni 23du'anii torban muraasa ta'eera. Gaazexessituun BBC Kinjaal Paandiyaa-Waag, imala baaburaa Mumbaay waggoota kurnan heddu fayyadamte irratti muuxannoo qabdu barreessite.
Baabura tajaajila geejjibaa jiraattota magaalaa Mumbaay tajaajila olaanaa kenna. Ummata miiliyoona saddeet ta'u guyyaatti kan olii gadi geessu yoo ta'u, baabura malee magaalicha keessa socho'uun rakkisaadha.
Dokimantarii, beeksisaa fi fiilmii Booliwuud irrattillee hedduu mul'atu. Isaaniin imaluun garuu muxannoo addaa qaba.
Barataa kollejjii ta'eeni baabura fayyadamuu kanan eegale. Bakka jiraadhurraa mana barumsaa Kibba Mumbaay argamutti sa'aatii lamaaf imalan ture.
Ibsaa, foolii fi wal-dhiibbaa namaa yeroo baaburri buufata Chaatirapaati Shivaajii (CST) seenu arge nan yaadadha. Baay'ee nama gammachiisa.
Suuta keessa hawaasa baabura sana geejjibaaf fayyadamutti michoome.
Imaltoonni baabura Muumbaay akka imaltoota magaalotaa fi biyyoota biraa mobaayilii isaaniitti garagalani xuxxuqan miti.
Asitti imaltoonni walitti haasa'u achumaanis walitti hiriyyoomu. Guyyaa guyyaatti sa'aatii dheeraaf waan wal arganif walitti dhiyaachuun inuma uumama.
Ummanni miiliyoona saddeeti ta'u guyyaatti baabura magaalaa Mumbaay geejjibaaf fayyadama
Imaltoota sirba fiilmii Booliwuud irratti jaalatan sirban yookiin kaardii taphatan arguun salphaadha. 'Kutaa dubartootaa' keessatti guyyaa dhalootaa keekii walii kennaa yeroo kabajan ni mul'ata.
Kutaa guddicha imaltoota dhiiraaf qophaa'e keessatti faaruu amantii yeroo faarsanis arguu dandeessu.
Hamiin waan barame. Wanti asitti hin dubbatamne hin jiru. Wanta waajjira keessa isaan mudate, waa'ee soddaa isaanii fi fiilmii jaalatan walitti haasa'u.
Dubartii umuriin ishee digdama keessa taatu rakkoo hojjeettoota Indiyaa yeroo dubbatte nan yaadadha.
''Imala irra waan dadhabuu fi hojii waliin waan ulfaatuuf guyyaatti si'a tokko qofa ganama akka nyaata qopheessu harmee jaarsa kootti himeera. Isheen irbaata nu hojjechuu qabdi.''
Yeroo namni baay'atutti kutaan imaltoonni keessa dhaabatan walloluun ni mudata. Imaltoonni yeroo hundaa fulduratti darbuuf waldhiibu. Kanatu nama wallolchisa.
Yeroo tokko tokko dafe nagana bu'a. Yeroo kaan garuu haga namni inni kaan baabura irraa bu'utti itti-fufa. Wal arrabsuun waan baarame. Wal rukuchuun, waldarbachuun, fuula keessa wal kabaluun, rifeensa wal harkisuun baramaadha.
Namoonni geejjiba baaburaa fayyadaman osoo namni guutuu isaa argani seenuuf yeroo waldhiiban afaan waldarbuun mudata
Yeroo tokko na dursani seenuuf yeroo jedhani uffata koo si'a hedduu narraa baasaniiru.
Kutaa imaltootaa guute keessa seenuuf yeroo jedhutti balbala baaburaarratti yeroon kufe nan yaadadha. Dubartii na dura jirtutti iyyee akka na duraa fuulduratti deemtu gaafadhe beeka. Yeroos keessa seenuu nan danda'a.
Wanti baay'ee nama naasisu immoo baabura namni itti baay'atu ta'uus hanga baaburri deemu eegalutti balballi isaa hin cufamu.
Rakkoon biraa immoo osoo baaburri hin dhaabatin isa namni yaabbatudha. Yeroo hedduu utaalee seenuuf ykn harka nama biraa qabadhee seenuuf nan eeggadha. Yoon bakka taa'umsa arge waan guddaadha.
Madda suuraa, Kinjal-Pandya Wagh
Baabura magaalaa Mumbaay irratti imaluun rakkisaa ta'us gammachuu qaba
Bakka teessu yoo dhabde, namni taa'u buufata kamitti akka bu'u dursitee gaafatte mirkaneeffatta. Gaafa bu'an teessuma argatta jechuudha.
Muuxannoo imala baaburaa kana tilmaama kee irratti hundaa'a. Jaalachuus ta'e jibbuu dandeessa.
Anaan garuu akka baay'ee obsu na barsiise. Imalli baaburraa kuni ummata jireenya garaagaraa qabu walitti fiduus galma tokko qabu: lubbuudhaan bakka adeeman gahuu barbaadu.